Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo geeriyooday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRaysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo geeriyooday
July 12, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Xasan Abshir Farax. [Isha Sawirka: Reuters]
Ankara-(Puntland Mirror) Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta oo Axad ah ku geeriyooday dalka Turkiga, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisu.
Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka tacsiiyeeyay geerida ku timid raysulwasaarihii hore.
Marxuumka ayaa sanadihii u dambeeyay xanuunsanayay isaga oo ku sugnaa wadamada Kenya iyo Turkiga, sida xubno katirsan qoyskiisa ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Wuxuu kamid ahaa golaha baarlamaanka Soomaaliya xukuumadii Xasan Shiikh Maxamuud. Waxa uu jiray 75 sanno, sida ku qoran taariikh nololeedkiisa.